Ukuhanjiswa kwamahhala kuqhathaniswa nokwehliswa | Martech Zone
Ukuhanjiswa Kwamahhala kuqhathaniswa Nesaphulelo
Lwesine, Disemba 1, 2011 NgoLwesine, Juni 18, 2015 Douglas Karr
Angiqiniseki kangako ukuthi ungalinganisa lezi zindlela ezimbili zokuheha amakhasimende. Kubonakala kimi ukuthi ukwenza isaphulelo kuyindlela enhle yokuletha umuntu kusayithi lakho le-ecommerce, kepha ukuhanjiswa kwamahhala kungaba yindlela yokwandisa amazinga wokuguqulwa. Ngiyafisa nokwazi ukuthi abathengi abathengisa abathembekile bathembeke kangakanani. Uma wehlisela isephulelo, ingabe abantu bayabuya futhi bathenge ngaphandle kwesaphulelo? Uma unikela ngokuthunyelwa kwamahhala, akusona yini isici sesayithi lakho wonke umuntu azolindela futhi asisebenzise kaninginingi?
Enye yezinselelo ezinkulu abathengisi be-Intanethi ababhekane nazo kusukela ngosuku lokuqala ukumelana nemali yokuthumela. Ukwenza ukuthenga kuwebhu kufane nokuthenga mathupha, abanye abathengisi baqala ukuhambisa ngokuthumela kwamahhala ngama-oda aku-inthanethi. Ingabe ukuhanjiswa kwamahhala kuyabashukumisa ngempela abavakashi bewebhusayithi ukuthi bathenge okuningi? Ukusuka Isimali I-infographic.
Tags: kuncishiswaukuthumela kwamahhalaukuthengwa kwe-inthanethilokuthumela